Winetime Seafood Nkwakọ - Imewe Mmewe
Nkwakọ Ihe eji emechi ya maka usoro onyuochi oke nke oge a kwesiri igosiputa ihe ohuru na ntukwasi obi nke ihe ahia a, o kwesiri idi iche na ndi ozo ndi ozo, nwee nkwekorita na nghota. Colorscha ndị eji (acha anụnụ anụnụ, ọcha na oroma) mepụta ọdịiche, mesie ihe ndị dị mkpa ike ma gosipụta ọnọdụ ika. Otu echiche pụrụ iche zụlitere dị iche na usoro ndị ọzọ. Atụmatụ nke ịhụ ụzọ mere ka o kwe omume ịmata ngwaahịa dị iche iche nke usoro a, yana ojiji nke atụ kama foto mere ka nkwakọ ngwaahịa ahụ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karị.
Aha oru ngo : Winetime Seafood, Aha ndị na-emepụta ya : Olga Takhtarova, Aha onye ahịa : SOT B&D.
Nkwakọ Olga Takhtarova Winetime Seafood